Moa ve mendrika mividy mangina, fanless PC? - News Fitsipika
Moa ve mendrika mividy mangina, fanless PC?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Moa ve mendrika mividy mangina, fanless PC?” dia nosoratan'i Jack Schofield, fa theguardian.com ny alakamisy 19 Novambra 2015 09.12 UTC
PCs izao ve fanless-pisainana hividy? I manao be dia be ny feo ny firaketana sy ny hevitra iray tena mangina PC dia tena tsara tarehy. Peter
Recent fanavaozana ao amin'ny PC tsena no natokana ho famokarana mora kokoa fanless PCs, na dia izay tsy tena ny tanjona. Ny fifantohana dia eo amin'ny famokarana sy ny takela-bato thinner solosaina, Fa ireo kosa dia manana olana lehibe dissipating hafanana. Intel resahana ity olana ity amin'ny alalan'ny tsikelikely fampihenana ny habetsaky ny hery ny poti-handevona. Ankehitriny dia tsy mahazo ho mafana, izy ireo tsy mila ny mpankafy.
Ohatra, tena mafy biraonao processeur toy ny Intel Core i7-4960X manana TDP (mafana famolavolana fahefana) ny 130W, izay mafana. Solosaina ampiasaina mba manana 45W na 35W processors, izay lavo tamin '15W ny 17W for manify milina. Intel Core M isan-karazany ny nitondra izay nidina ho any 4.5W. ankehitriny, dia mora Intel Atom-monina poti (matetika Pentium na Celeron notombohina tamin'ny vy) mihazakazaka amin'ny 6-10W.
Misy lafiny ratsy. Rehefa mahazo poti ireo mafana, ny zava-bitany dia tsy maintsy throttled, na dia nakatona tanteraka. Izany no tsara ho an'ny mitsitaitaika fampiasana teny toy ny fanodinana sy ny fikirakirana tranonkala. Na izany aza, ireo poti-tsy sahaza ho an'ny asa fanodinana nanohana toy ny lahatsary fanovana sy lalao, ary dia afaka miady amin'ny teny fampifangaroana sy ny fanitsiana.
A mahery PC biraonao Mety ho telo na mihoatra mpankafy. Ny CPU sy ny hery famatsiana dia hanana ny mpankafy, ary dia toy izany no hifady hanina sary karatra amin'ny GPUs (sary fanodinana vondrona). Indraindray, misaraka raharaha mpankafy dia mivezivezy rivotra mba kapila aelin'ny sy ny faritra hafa antonony mangatsiatsiaka.
Mazava ho azy, mahia solosaina sy ny takela-bato mihazakazaka amin'ny vatoaratra, ka tsy mila hery anaty vatsy. Na samy hafa aza izy ireo sary karatra: dia matetika manana GPUs tafiditra amin'ny processeur, toy ny ao amin'ny "Intel Integrated Graphics".
Raha toa ka tsy mila be dia be ny hery, dia maro ireo kely, mora PCs izay mampiasa ny teknolojia ho toy ny mitovy manify solosaina. Izy ireo na fanless, na ny mpankafy dia efa noiseless, afa-tsy raha ny processeur no entin'ny mafy.
Na izany aza, Raha toa ka mila fampisehoana ho an'ny asa ambony toy ny lahatsary fanovana na lehibe lalao, Avy eo dia mbola misy zava-tsarotra. Mety mila hery fanless famatsiana sy fomba vaovao kokoa ho hihena. Anisan'izany hafanana fantsona - Izay miha manify fahita amin'ny solosaina - ary indraindray rano hihena.
Mini PCs sy nettops
Raha te zavatra kely sy mora vidy, misy ny mahazatra plethora ny safidy: mitady "Mini PC"Ao amin'ny Amazon.co.uk mahazo mihoatra noho ny arivo vokatra. Mitady "nettop PC"Mahita kokoa manageable 34 vokatra, satria izany teny efa ankamaroany nandatsaka avy amintsika. Tsy rehetra ireo milina ireo fanless, fa ny ankamaroany dia tokony hihazakazaka amim-pahanginana, raha tsy tena tototry.
Ny olona matetika hametahana ireo rafitra ny fisaka-efijery TV milentika: ry zareo tsara ny lahatsary mivantana, misambotra-up TV tolotra, sy tsotra computing. Afaka ihany koa ny mihazakazaka Spectrum, Mame sy ny lalao emulators.
Any amin'ny farany ambany, misy mora ny rafitra toy ny fanless Voyo tsara tarehy Mini PC. Izany dia manana Intel Atom 1.33GHz Z3735F, 2GB ny fahatsiarovana sy 64GB ny eMMC Chip fitehirizana sy ny seranan-tsambo ho an'ny HDMI 4K £ ihany 89,99. Izany be mitovy spec toy ny fidirana-anivon'ny 10in Windows laptop na 2-in-1, fa raha tsy misy ny fitendry sy ny lamba fanakonana. Izany mitantana ny 32-bit Windows 8.1With Bing (angamba ny dikan-maimaim-poana), fa mahazo maimaim-poana fanavaozana ny Windows 10.
Sumvision ny Rivo-doza dia tsara-fantatra amin'ny hafa toy izany koa famaritana for £ 98,50. The Gigabyte Brix isan-karazany ihany koa mendrika ny fijery.
Raha te zavatra mahery vaika kokoa, misy ny Eggsnow isan-karazany ny fanless, aluminium Mini PCs. Anisan'izany Core i3-4010U na Core i5-4200U dika amin'ny 4GB ny fitadidiana sy ny 64GB SSD for £ 212,99 sy £ 248,99 tsirairay avy. Na izany aza, dia afaka hitondra any 16GB ny fahatsiarovana, niakatra ho any 256GB SSDs, ary niakatra ho any 1.5TB mafy aelin'ny. Afaka mividy lehilahy iray tena ratsy Core i3 rafitra ho an'ny £ 156,99 sy hifanaraka ny amin'ny fahatsiarovana sy SSD.
Ny modely Eggsnow mifaninana amin'ny Apple ny Mac Mini, izay manomboka amin'ny £ 399 ny Core I5 ​​rafitra amin'ny 4GB ny fitadidiana sy ny 500GB fiara mafy, ary mananika ny avy amin'ny £ 799 ho an'ny iray amin'ny 8GB sy ny 1TB fiara (na £ 1.759 rehetra ny upgrades). Na izany aza, ny farany 2014 Mac Mini no soldered-ho fahatsiarovana, ary dia vokatry ho fanavaozam-baovao.
Fanorenana mangina PCs ampiasaina ho kanto izay singa tafiditra manokana, toy ny fanless fahefana fitaovana sy ny ranon-javatra hihena, nanampy damping for nihodina aelin'ny, ary mandinika ny airflow ny alalan 'ny raharaha. I mihevitra Chillblast Mbola manao izany ny sasany. Na izany aza, zavatra mora kokoa amin'izao fotoana izao, satria orinasa dia afaka manomboka amin'ny barebones tranga toy ny Mivezivezy ary kely ITX motherboards, na mampiasa kely fotsiny Intel NUC (Next Unit ny computing).
Ny NUC matetika dia ahitana ny lehibe sy ny kely heatsink mpankafy, izany aho, tsy manantena ny eny-ny-talantalana dikan mba hangina. Na izany aza, orinasa sasany no natao NUC tranga izay, amin'ny ankapobeny, miasa toy ny hafanana be milentika. Mazava, ianao dia tsy mihazakazaka ny iray tao amin'ny toerana tsy afa-miala, fa amin'ny toe-piainana ara-dalàna, afaka hampiely ampy hafanana mba hijanona ao anatin'ny faritry ny TDP.
PC mangina ny UltraNUC dia ohatra, amin'ny rafitra natsangana-to-ny filaminana ao amin'ny UK. The UltraNUC Atom Malagasy Bible manomboka amin'ny £ 325, raha ny Abela-cased UltraNUC Pro fanless manomboka amin'ny £ 595. Mangina PC dia manolotra ihany koa ny maro hafa, na mangina mangina PCs, haino aman-jery foibe sy ny fialam-boly ny rafitra, dia mety hahita zavatra izay tiany anao tsara kokoa.
Aleutia ny R50 Fanless - "Sokitra sy norafetiko ao amin'ny UK" - dia matanjaka fa classy tarehy NUC Variant. Na izany aza, Izany dia midika hoe tena natao ho an'ny indostria sy ara-barotra fampiasana. An R50 fitsipika amin'ny Core i3, 4GB ny fahatsiarovana sy ny 60GB SSD ny vidin'ny £ 599. Aleutia ihany koa ny mivarotra ny T1 nettop "Eco PC"Amin'ny Celeron J1800 sy 2GB ny fahatsiarovana for £ 349, na amin'ny 4GB, ny 120GB SSD sy Microsoft Windows for £ 499. Tiny Green PC dia hafa mpamatsy.
Amin'ny tranga rehetra, ny etsy ambony, roa-maso mba hahitana raha ny vidiny dia ahitana ny dika mitovy amin'ny Windows. Most manao, fa ny sasany PCs Mini no amidy tsy misy rafitra fandidiana ho an'ny olona izay te-hihazakazaka Linux.
Ankehitriny izao ny ankamaroan'ny Desktops nihazakazaka mangina, afa-tsy raha miady saina, ary ny fironana mankany amin'ny ambany-TDP Atom processors sy SSDs no mahatonga azy ireo na dia mangina. (Azonao atao ny manamarin ny TDPs sy benchmarks ny samy hafa ao amin'ny Notebookcheck poti ny Fampitahana ny Mobile Processors.)
Ny fanontaniana tsy maintsy hamaly izao dia (iray) ohatrinona ny hery no ilainao, ary (amin ') ohatrinona no vonona ny handoavana ny fahanginana?
Raha te-hanao fandraisam-peo ao amin 'ny efitrano ho toy ny PC, Mijoro ho ao an-tsaina fa ny totozy-kodiarana dia mety hanao kiti tabataba - Eny, I Efa tratra namoaka izany - ary Keyboard fampiasana angamba avy amin'ny fanontaniana. Misy ireo fotoana izay mikasika-efijery manana ny tombony azo amin'ny hoe mangina.
33609	0 Article, Anontanio Jack, Computing, Toetoetra, Jack Schofield
← Previous Post Rehefa ianareo rehetra manana dia marotoa, Isis mijery toy ny fantsika →